पुल्चोकमा किन निर्ममतापुर्वक कुटिए एक जनताको रक्षक प्रहरी जवान ? - Open Khabar - नेपाली अनलाइन डिजिटल पत्रिका
सोहन राई १८ भदौ २०७७
काठमाडौं । ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको रातो मच्छिन्द्र नाथको रथ तान्ने विषयमा स्थानीय प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। कोभिड १९ का कारण सरकारले भेला भएर विभिन्न चाडपर्व मनाउन निषेध गरिरहदा स्थानीयले प्रशासनको वेवास्ता गर्दै रथ तान्न खोजेपछि प्रहरी र स्थानीयबीच झडप भएको हो।
बिहान सम्मको अवस्था सामान्य नै थियो भने दिउँसो करिब १ बजेपछि स्थिति निकै गरम बन्यो। निषेधाज्ञा तोडेर रथ तान्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनमा प्रहरीले भिड नियन्त्रण गर्न वाटर क्याननको प्रयोग गरेका थिए। पानीको फोहोरा हान्दा समेत प्रर्दशनकारीले वेवास्ता गरेपछि लाठीचार्ज गर्नुपरेको ललितपुर प्रहरीले जनाएको छ। प्रदर्शनकारी एकाएक प्रहरीमाथी जाइलागे पछि प्रहरीको तर्फबाट अश्रु ग्यास र प्रदर्शनकारीको तर्फबाट ढुंगा बर्सिन थाले।
यतिबेला सामाजिक संञ्जालमा एक ट्राफिक प्रहरी जवान जसले प्रदर्शनकारी बाट निर्ममतापुर्वक कुटाइ खाइ घाइते भएको दृश्य / भिडियो निकै भाइरल भइरहेको छ।
( भिडीयो साभार : सामाजिक संञ्जाल )
उनको शरीरमा निकै चोट लागे पछि अहिले उनको उपचार अल्का अस्पतालमा भइरहेको छ। आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परेका घाइते जवान कमल प्रसाद घिमिरे महागनरीय ट्रफिक प्रहरी प्रभाग मंगलबजारबाट बिहानैदेखि सवारी व्यवस्थापनका लागि ड्युटीमा खटिएका थिए।
ट्राफिक प्रहरीको ड्युटी सवारी व्यवस्था मात्र हेर्ने भएकोले उनी त्यही क्रममा सवारीको डाइभर्सन गर्न गएका थिए। तर, आन्दोलनकारीले उनलाई मोटसाइलबाट थुतेर लछारपछार, मुक्का प्रहार गर्दै उनी चढेको मोटरसाइकल जलाएका छन् भने उनले प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल पनि सोही झडपमा हराएको छ।
भिडियोकोलागी लिङक किलिक गर्नु
आखिर गल्ती कस्को ? के आफ्नो संस्कृति जोगाउनु गल्ती हो या जनताको सुरक्षा गर्नु गल्ती…